Ngalaba njem na ndị ndu ụwa na-etinye aka na nchedo ụmụaka pụọ ​​n'aka ndị na-eme mpụ ụmụaka
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Colombia » Ngalaba njem na ndị ndu ụwa na-etinye aka na nchedo ụmụaka pụọ ​​n'aka ndị na-eme mpụ ụmụaka
Nzukọ International maka Nchedo Childmụaka na Njem na Njem Nleta ga-eme na Agora Bogota Convention Center na Avenida Calle 24 # 38 - 47 na Bogota, DC, Colombia, site na Wednesde, June 6, ruo Tọzdee, June 7, 2018.
Njem na njem nleta amụbaala ngwa ngwa gburugburu ụwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya, mba dị iche iche na-erite uru site na uto a. Industrylọ ọrụ a na-ewe ọtụtụ nde mmadụ n'ọrụ, na-akpata ọtụtụ ijeri ego, ma nwee ikike ime ka ọtụtụ narị nde mmadụ pụọ na ịda ogbenye. Agbanyeghị, dịka ndị njem na-achọgharịkwu n’ụwa, otu a ka ọ dịkwa ndị ga-emerụ ụmụaka ahụ site na-emegbu ha ma ọ bụ na-emegbu ha.
N'ebe niile ndị njem mba na mba na-agakarị, na ndị njem achụmnta ego, ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ nke mmetọ n'ụzọ mmekọahụ na nrigbu. Ndị omempụ na-ejikarị ịda ogbenye, enweghị ike mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iwu na-adịghị ike, na ọdịbendị nke enweghị ntaramahụhụ eme ihe.
Enwere ike irigbu ndị a metụtara ebe ọ bụla, gụnyere ụlọ oriri na ọ ,ụ barsụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ mmanya, na ebe a na-asa ahụ yana n'okporo ámá na naanị ha n'abalị na n'ehihie.
Ọ dịghị mpaghara nke mpụ a na-emetụtabeghị, ebe ọ bụ na mba ọ bụla na-adịghị emetụta, karịsịa na mfe nke ndị mmejọ nwere ike ịmalite ịkpọtụrụ ndị ha metụtara site na ngwaọrụ na nyiwe nke teknụzụ Intanet na nkwukọrịta, gụnyere ekwentị.
Okwu mmechi na ogbako mgbasa ozi nke gosipụtara President nke Colombia, Juan Manuel Santos Calderon, ga-eme na June 7 na 1700 awa.
Ndị bịara ama gụnyere:
• Juan Manuel Santos Calderón, Onye isi ala Colombia
• Onye a na-asọpụrụ Sandra Howard, onye osote onye nlekọta njem nlegharị anya, gọọmentị nke Colombia na onye bụbu onye isi oche nke UNWTO General Assembly
• Maria Lorena Gutiérrez, Mịnịsta nke Azụmaahịa, Mmepụta na Njem Nleta, Gọọmentị nke Colombia
• Griselda Restrepo, Mịnịsta na-arụ ọrụ, Gọọmentị nke Colombia
• Mariama Mohamed Cisse, Onye isi nduzi nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọha na Ọha nke Afrika na Onye Nchịkọba, Kọmitii Africa nke Ndị Ọkachamara gbasara Ikike na Ọdịmma nke Nwa (ACERWC)
• Helen Marano, Onye isi oche ndị isi na-ahụ maka ihe ndị dị na mpụga, World Travel and Tourism Council
• Philip KH Ma, Onye isi oche nke Chamberlọ Ọrụ Nleta nke China
• Alejandro Varela, osote Director nke America, United Nations World Tourism Organisation
• Cornelius Williams, Global Chief of Child Protection, UNICEF
• George Nikolaidis, Onye isi oche nke Kọmitii Lanzarote, Council of Europe
• Bjorn Sellstrom, Onye Nchịkọba Mpụ megide ụmụaka Team, INTERPOL Isi ụlọ ọrụ
• Oriaku Margaret Akullo, onye nchikota oru ngo nke GLO.ACT, UNODC HQ na Vienna
Nzukọ a na-ahazi ma na-akwado ya: Ministrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahịa, Mmepụta na Nlegharị Anya nke Colombia; Ndị Ọrụ Njem Nleta nke Isi Obodo District nke Bogota; Colomlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ofesi na Colombia; Colomlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchedo Childmụaka nke Colombia; na Fundación Renacer / ECPAT Colombia. Ndi haziri ya bu: World Travel and Tourism Council (WTTC), Task Force High Level na nchekwa umuaka na njem na njem nlegharị anya, United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC ), na ECPAT International.
Nzukọ ahụ bụ ihe na-esochi na Ọmụmụ Ihe Globalwa Banyere Mmekọahụ nke Childrenmụaka na Njem na Njem Nleta, mgbalị mbụ nke ndị mmekọ 67 gbakọtara iji ghọta ọdịdị ụwa na oke mpụ a. Ọmụmụ ihe ahụ na-akọwapụta ndụmọdụ ga-achọ imekọ ihe ọnụ site n'aka UN, gọọmentị, NGO, ndị uwe ojii, na azụmahịa ndị lekwasịrị anya. Nzukọ a ga-enwe nkwekọrịta banyere otu esi emezue atụmatụ ndị a.
Ajụjụ ga-eme n'oge nnọkọ niile nke ndị na-eso ya na ndị odeakụkọ na-anabata ka ha gaa nnọkọ ọ bụla. Na media nwere ike itinye akwụkwọ maka nzere ntozu na ndebanye aha ebe a.
Airlinesgbọ elu Hong Kong na-eme ka ọnụnọ mpaghara na ọrụ Manila ọhụrụ pụta
Kakaako a Honolulu trendy obi: Nchekwa ka Japanese njem nleta?
Ọnụ ọgụgụ COVID-19 nke mba India ruru 22,662,575
Njem Nleta Jamaica na-akpọ maka olu olu Caribbean dị iche iche megide enweghị ọgwụ mgbochi
Red tourism ghọrọ nhọrọ kachasị elu maka ọtụtụ ndị China n'afọ a
Asọmpi Hemingway Look-Alike na-alaghachi na Key West